Toamasina : olona fito tratra nangalatra vary 97 gony tamin’ny varin’ny BNGRC | NewsMada
Toamasina : olona fito tratra nangalatra vary 97 gony tamin’ny varin’ny BNGRC
Mpiasan’ny BNGRC ihany ny iray amin’ireo olona fito tompon’antoka tamin’ny halatra vary miisa 97 gony tamin’ny varin’ny BNGRC Toamasina. Nihoatra ny isa tokony hoentiny ny vary nentin’ny kamiaobe roa nivoaka tao amin’ny seranana…
Saron’ny zandary miasa eo anivon’ny seranan-tsambon’i Toamasina, ny 11 oktobra 2017 ireo olona fito tompon’antoka tamin’ny halatra vary 97 gony tamin’ny varin’ny BNGRC Toamasina. Araka ny angom-baovao nampitain’ny zandary ao an-toerana, nanao ny asa fikaroham-baovao mahazatra azy ireo zandary zandary ao amina’io seranana io (kaompania, peloton de surveillance, brigade judiciaire) ka nandre tamin’ny 4 ora hariva tamin’io daty io fa misy fiarabe namoaka vary mihoatra no ho ny tokony hoentiny mivoaka avy ao amin’ny seranan-tsambo. Vary avy amin’ny BNGRC tokony hoentina any Sakaraha, Ihosy, Ambalavao ary Ambatofinandrahana ireo. Nanao fikarohana avy hatrany ny zandray ka tratra tao Mangarano Toamasina ireo kamiaobe roa nitondra ireto vary halatra ireto. Natao ny fisavana sy ny fanamarinana ka nihoatra ny tokony ho izy ny vary nentin’ilay kamiaobe. Raha tokony ho 700 gony avy no nakarina dia nitondra 750 gony ny kamiaobe iray ary 747 kosa ny an’ilay kamiaobe faharoa. Tao Mangarano no saika hampidinan’ireo mpitatitra ireo vary nangalariny ireo mialoha ny hitaterana ny entana amin’ny isa tena marina.
Nentina niverina tao amin’ny seranana ireo kamiaobe roa ireo sy ireo olona voasaringotra amin’ity raharaha ity. Olona enina voatazona niampy olona iray mpiasan’ny BNGRC (magasinier) izay hatolotra ny fampanoavana aorian’ny famotorana.